Apple inogadziridza yayo macOS (yaimbove Mac OS X) desktop uye laptop inoshanda system kamwe pagore, senge wachi wachi, kuunza maficha nyowani nekuvandudza. Izvo zvese zvakanyatsonaka, asi Apple yazvino vhezheni vhezheni yeMacOS - Big Sur - haimhanye pane chero Mac yakura kupfuura 2013, uye mune dzimwe nguva 2014. Izvo zvinogona kureva kuti Mac yako haigone kuvandudzwa zviri pamutemo - kunze kwekunge watevera. dzidziso iyi.
Usati waenderera mberi nekutevera rairo pazasi pezwi reyambiro: pane chikonzero nei Apple ichisarudza kusatsigira iyo nyowani Mac inoshanda sisitimu pane akura maMac. Vakuru maMac chete havana izvo zvinodiwa zvinhu kana simba rinodikanwa kuti vatarisane nezvinodiwa zvehurongwa hwazvino uno. Saka kana iwe ukaisa Big Sur, Catalina, kana chero yazvino vhezheni yemacOS pane isingatsigirwe Mac usatarisira kuti ifambe mushe.
Mac yangu yanyanyisa kuchembera kuti iite update?
Tine a macOS inoenderana yekutarisa pano, saka iwe unogona kuona kuti ndedzipi shanduro dzeMacOS yako Mac inokwanisa kukwanisa kumhanya.
Heano mhedziso yeMacs inomhanya Big Sur, maererano naApple:
Apple inopa zano kuti macOS Catalina inomhanya pane anotevera Macs:
Apple inopa zano kuti macOS Mojave inomhanya pane anotevera maMacs:
Mac mhando kubva 2012 kana gare gare
iMac Pro (kubva 2017)
MacBook mamodheru kubva 2015 kana gare gare
MacBook Pro mamodheru kubva 2012 kana gare gare
MacBook Air mamodheru kubva 2012 kana gare gare
Mac mini mamodheru kubva 2012 kana gare gare
Mac Pro mamodheru kubva kunopera kwegore ra2013 (kuwedzera pakati pa2010 uye pakati pa2012 modhi ine yakakurudzirwa Metal-inokwanisa GPU)
Iyo yekare macOS Yakakwira Sierra yaive nehurefu hwakawedzera. Apple yakati yaizomhanya nemufaro mukupera kwa2009 kana gare gare MacBook kana iMac, kana 2010 kana gare gare MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini kana Mac Pro.
Kana iwe Mac ichitsigirwa verenga: Maitiro ekuvandudza kune Big Sur.
Izvi zvinoreva kuti kana Mac yako yakura kupfuura 2012 haizokwanise kumisikidza zviri pamutemo Catalina kana Mojave. Muchiitiko cheCatalina iyo inosanganisira ese ekare-maitiro Mac Pro mamodheru, pre-'trash can '. Kana iwe uchida kumhanya , asi yako Mac yakura kupfuura 2013/2014, iyo macOS nyowani haisi yako, sekusvika Apple iri zvakadaro.
Nekudaro, zvisinei neizvi zvinokwanisika kumhanyisa nyowani macOS vhezheni pane ekare maMacs nekutenda patcher.
Usatarisira kuti zvinhu zvive pachena kufamba nechikepe kunyange - zvirizvo unofanirwa kutarisira kusangana nematambudziko. Iva wakagadzirira chokwadi chekuti Mac yako haizoshanda nemazvo uye unogona kurasikirwa nedata. (Nechikonzero ichocho tinokurudzira kuita backup yakazara yeMac yako kutanga).
Semuenzaniso, maMac mazhinji akura ane matambudziko neiyo Wi-Fi yekubatanidza mushure mekuisa macOS Big Sur. Kana iwe uchida Wi-Fi, kuisa iyo preview vhezheni haina zano.
Kumhanya Big Sur pane imwe macOS pane isingatsigirwe Mac inogona zvakare kutariswa ichipesana nemitemo nemamiriro eApple. Kuti uwane ruzivo nezve Apple mamiriro uye mamiriro akaverengwa: Unofanirwa kubvumirana nemitemo nemamiriro eApple.
Kufungisisa kana zvakakodzera kugadzirisa Mac yako? Verenga: macOS Big Sur vs Catalina.
Maitiro ekuisa Big Sur pane isingatsigirwe Mac
Kana Mac yako ichidarika makore mashoma uye iwe ukaedza kuisa Big Sur pairi iwe unorova zvipingamupinyi zvishoma - yekutanga iri chokwadi chekuti Software Gadziriso haingorega iwe uchiisa iyo nyowani vhezheni ye macOS.
Nekudaro, izvi hazvireve kuti kuisa Big Sur pane akura Mac hazviite. Zviri - iwe unongoda chigamba. Neraki pane patcher yekuisa macOS Big Sur pane maMac akura anowanikwa - iyo guru-sur-micropatcher inogona kutorwa pasi kubva kuGitHub.
Ziva kuti macOS patchers haakwanise kuita mashiripiti uye haazi ese maMacs anoenderana. Usati waisa Big Sur pane yekare Mac, ita shuwa kuti yako Mac inoenderana neye patcher. Pa peji yechigamba (chakabatanidzwa pamusoro) iwe unowana mamwe manotsi anoratidza makore akasiyana ekugadzira. Usati wasimudzira kune macOS Big Sur ongorora zvinoenderana manotsi.
Maitiro ekuvandudza kune imwe nyowani yemacOS pane zvisingawirirane maMac ndeanotevera:
Kutanga iwe unozofanirwa kutora mafaera ekumisikidza eanoshanda system. Iwe unofanirwa kutora izvi uchishandisa Mac inoenderana. Kana vakasazviratidza muSoftware Rudziro unogona kutora mafaira ekumisikidza kubva ku Mac App Store.
Iye zvino iwe unofanirwa kurodha aya ekuisa mafaera padanda re USB uye gadzirira iyo USB tsvimbo yekuisa macOS Big Sur. Tinotsanangura maitiro ekugadzira bootable installer ye macOS mune chinyorwa chakaparadzana.
Tevere iwe unofanirwa kuwana software iyo inokwanisa kunyengedza iyo yekuisa mafaira eiyo vhezheni ye macOS iwe yaunoda kuisa mukutenda kuti Mac inoenderana. Unogona kurodha patcher yatataura pamusoro kubva GitHub. Dzvanya paKodhi uye Dhawunorodha Zip mabhatani.
Mushure mekutora iyo dura kubva kudownload yako iwe unowana iyo faira "micropatcher.sh".
Vhura iyo yekupedzisira windows uye dhonza uye udonhedze iyo faira mune iyo terminal. Wobva wamhanya iwo wekuraira.
Iye zvino isa macOS kubva kune yako bootable simaki.
Mune zvimwe zviitiko, kuchine mabasa ekuitwa mushure mekumisikidzwa. Izvi zvinogona kuwanikwa mumirairo yehukuru-sur-micropatcher. Mushure mekugadzirira Mac neiyo USB tsvimbo, tanga terminal uye pinda "/ Volumes / Image Vhoriyamu / set-vars.sh". Iyo script chikamu chechimedu cheMacOS Big Sur uye inoshandura akakosha marongero ebhooting uye system mafaera.
Iyo yekuvandudza inogona kutora maawa akati wandei. Mune yedu kesi dzimwe nguva zvaitaridzika senge mugadziri akange abondera panguva yekuvandudza. Mune ino kesi iwe unofanirwa kumirira, sezvo kuisirwa kunowanzo kuve kuri kuitika. Nekufamba kwenguva, nzira dziri nani dzekuvandudza muchina dzinogona kuwanikwa. Parizvino, nzira yakachengeteka ndeyekuvandudza uchishandisa bhuti re USB.
Maitiro ekuisa Big Sur inogadziridza pane isingatsigirwe Mac
Paunenge iwe waisa macOS Big Sur, zvigadziriso zvinowoneka muSoftware Zvidzore pavanongowanikwa. Nekudaro, haufanire kuisa izvi, asi zvine musoro zvakare gadzira tsvimbo ye USB nemafaira aripo ekumisikidza uye gadza iyo yekuvandudza nenzira iyi.
Matanho aya akashandurwa kubva muchinyorwa nevamwe vedu ku Macwelt.
Maitiro ekumhanyisa Catalina pane akura Mac
Unogona kudhawunirodha macOS Catalina Patcher kubva kumugadziri anozivikanwa seDOSDude1. Iyo chigamba chichagonesa iwe kuisa Catalina pane yakura Mac.
Iyo Catalina kubheka haishande neMac yega yega, asi mazhinji akafukidzwa. Unogona ona kana Mac yako ichitsigirwa pano.
DODDude1 inopa vhidhiyo dzidziso pane yake webhusaiti, pano. Isu takarerutsa nhanho pazasi, asi tinokurudzira kuti iwe uteedzere dzidziso yake.
Dhawunorodha yazvino vhezheni yeiyo Catalina chigamba apa. (Unogona kuita mupiro).
Vhura iyo Catalina Patcher app.
Sarudza Dhawunirodha Kopi.
Iyo kurodha pasi (yeCatalina) ichatanga - sezvo ingangoita 8GB inogona kutora chinguva.
Chivhariso mune flash drive.
Sarudza 'Gadzira bootable installer' kubva pane zvingasarudzwa.
Isa iyo bootable installer muMac yaunoda kugadzirisa.
Tangazve Mac pawakabata Sarudzo / Alt kiyi. Izvi zvinokonzeresa kuti Mac izarurike muKutanga Manager.
Sarudza bootable installer drive uye Pinda.
Iye zvino Mac yako inofanira kuvhura muKudzoreredza.
Sarudza Reinstall macOS uye mirira iyo nyowani vhezheni ye macOS yekuisa.
Mushure mekumisikidza kwapera, iwe unofanirwa kutangazve iyo Mac muKudzoreredza modhi zvakare, uchisarudza iyo dhivha iyo ine bootable simaki.
Zvino sarudza macOS Post Kuisa uye zvigamba zvinodiwa zvinoiswa paMac yako kuitira kuti Catalina ishande.
Kana zvigamba zvashandiswa sarudza Force Cache Kuvakazve.
Kana yadzokazve, Mac yako inofanira iko zvino kuita kopi inoshanda zvizere yeMacOS Catalina.
Kana iwe uchimhanyisa vhezheni ye macOS inotangira High Sierra kana Mojave, iwe uchafanirwa fomati yako hard drive kune APFS.
Tine mamwe mazano nezve kuisa macOS kuburikidza neBootable Installer pano.
Maitiro ekumhanyisa Mojave pane yekare Mac
Sezvo naCatalina, chigamba chakanyorwa DOSDude1 chinoita kuti iwe ugone kuisa macOS Mojave pane yekare Mac.
Unogona dhawunirodha iyo Mojave Patch Turu pano.
Maitiro ekumhanyisa High Sierra uye mukuru pane akura Mac
DOSDude1 akanyora chigamba chakafanana cheHigh Sierra uye pamberi peiyo Sierra. Uine chigamba chakaiswa unogona kudzokera kumashure kusvika kwekutanga mamodheru 2008. Hazviite kuti umhanye sekurota, ndosaka Apple ichipa zano kupokana neiyi nzira yekuita. Asi iwe unofanirwa kugona kuzadzikiswa kuita.
Nei usingafanire kuisa macOS nyowani pane yekare Mac
Isu tinopa zano vatangi vetekinoroji kupokana nekuyedza iyi workaround: inoda chiyero chepakati chehunyanzvi hwehunyanzvi
Rangarira kuti tiri kupokana nezano repamutemo reApple pane ino, zvinoreva kuti kana chimwe chinhu chikatadza kufamba - uye izvo zvinogara zvichikwanisika neiyo OS yekuisa, kunyangwe iwe uri kushandisa zviri pamutemo software - waranti yako haigone kukuchengetedza. Ehe, hazvigone kuti yako 2008 Mac ichave iri pasi pechero waranti kuitira kuti irege kukunetsekana zvakanyanya.
Dzorera Mac yako usati waenda mberi. Uye uchengete mupfungwa mamwe mapango maviri.
Pane imwe nguva Apple inogona kubaya ichi kubvarura uye ichidzivirira kushanda mune ramangwana. Saka kana uine shungu, uye uchifara kuti njodzi nematambudziko zvakakukoshera, saka svetukira mukati uchiri kugona.
Zvikasadaro, iwe ungangoda kuverenga Maitiro ekutengesa yekare Mac.
Takatarisa izvo zviri kuuya muBig Sur - heino mutongo wedu: MacOS Big Sur: unofanira here kugadzirisa yako Mac?
Nzira yekudzikisira macOS Big Sur kuCatalina kana kupfuura
Maitiro ekurodha pasi macOS ekare uye Mac OS X shanduro